पृथ्वीनारायण शाह मगर्नीको कोखबाट जन्मिएका थिए -
पृथ्वीनारायण शाह मगर्नीको कोखबाट जन्मिएका थिए
काठमाडौं। नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गर्दै पृथ्वीजयन्ती तथा एकता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ । विसं १७७९ मा गोरखामा जन्मिएका पृथ्वीनारायणले २२ से र २४ से राज्यमा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गरेका थिए । सात महिनामा तन्त्रविधिबाट उनको जन्म भएको थियो । विसं १८०० मा नुवाकोटमा पहिलोपटक आक्रमण गर्दा उनी पराजित भएका थिए ।
१८०१ मा नुवाकोटमा विजयी भए । यसैगरी कीर्तिपुरमा पनि उनीदुई पटक पराजित भएका थिए । विश्वमा विजयी भई उपनिवेश चलाउन सफल अङ्ग्रेज सेना उनको नेतृत्वमा पराजित भएको थियो । शाहले ‘व्रतरत्नमाला’ नामक कृति लेखेका थिए । यसैगरी उनका तीन कविता पनि प्रकाशित भएको अनुसन्धानरत हरिप्रसाद सोडारीले बताएका छन् । पछि कृतिका रुपमा प्रकाशित गरिएको ‘दिव्योपदेश’ भने पृथ्वीनारायण शाहका भनाइ हुन् ।
पृथ्वी जयन्तीमा पहिले सार्वजनिक बिदा दिने गरिएकामा हाल कटौती गरिएकामा पुनः बिदा दिई देशभर मनाइनु पर्ने माग हुन थालेको छ । यसैबीच, पृथ्वीनारायण शाहको सम्बन्धमा विभिन्न टिका टिप्पणी हुँदै आएका छन् । लेखक दिन निशानी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, पाल्पा त्यहीँ छ। गोर्खा त्यहीँ छ। नुवाकोट त्यहीँ छ। कहाँको नेपाल एकिकरण गरे पृथ्वी नारायण शाहले?
साथै निशानीले पृथ्वी नारायण शाह मगर्नीको कोखबाट जन्मिएको भनेर उल्लेख गरेका छन् । पृथ्वीनारायाण शाहको जन्मजयन्तीको अवसरमा उनले लगातार ट्विट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, पंचायती शासकहरुले लेखिदिएको हावादारी किताबको छाप सानै कक्षामा पर्यो केटालाई। त्यो बाहेक अरु किताब पढेकै छैन त के जानोस् !
क्षेत्री बाहुन साथिहरु पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान हुँ जस्तै गर्छन् । पृथ्वीनारायण शाहको युग भन्दा अगाडि पनि पहिचान सहितको विशाल नेपाल थियो भनेर कहिले बुझ्ने ? बाहुनबादी नितीले फूलबारीको फूल हैन जरा नै उखेलिदियो भनेर किन नबुझ्ने ? भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन् ।
यस वर्षको चाडपर्व भर्चुअल रूपमा मनाउन आग्रह
बेकारमा कोरोना नजचाउँनुहोस्, चिकित्सक आफैं संक्रमित छन् …
यादमा बाँचिरहेको मान्छे साथ नहुँदैमा विलिन भएको भन्न कहाँ मिल्छ र – श्वेता
‘सर्वोच्चको फैसलाले न्याय मरेको अनुभूति भयो’ : सांसद चौधरी
अदभूत स्मरण शक्तिका विजय शाही विवेकानन्द बन्न सक्छन् ?
अयोध्यामा दु’खेको सनातन मन ओम पर्वतका लागि किन दु’ख्दैन ?
जब प्रचण्ड-बाबुरामलाई मेरो लुगा गन्हायो…